Iphupha malunga nomlingo Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Xa sisiva igama elithi "wizard," abanye bethu ngokuqinisekileyo baya kucinga ngoDavid Copperfield, uHarry Potter okanye, ewe, uMerlin, oyena udumileyo kubo bonke oosiyazi. Ngoluphi uvuyo esivumela ukuba sihanjiswe ngomlingo kwihlabathi lokukhohlisa okusimangalisayo njengomntwana. Kodwa kukwakho namakhubalo amabi, njengalawo aqheliselwa ngamagqwirha okanye abefundisi be-voodoo, kwaye banokusoyikisa.
Ngamakhubalo afana nodumo "Hokuspokus Fidibus" sinomdla wokwazi ukuba kuza kwenzeka ntoni emva koko. Nokuba kusekisini, kumdlalo weqonga okanye kumdlalo bhanyabhanya, umlingo olungileyo ubonwabisa abaphulaphuli bayo ngeyona ndlela inzima yelizwi. Umlingo usika umncedisi wakhe kwaye ngequbuliso uthumela umnxeba kumdlalo weqonga kunokwenzeka ngokungathi ngomlingo. Okanye ngequbuliso uvumela izinto ukuba zivele kumnqwazi wakhe womlingo, oqhele ukuba yisilinda.
Kodwa yintoni imfihlo efihliweyo emva komfanekiso wephupha "lobugqi"? Ngaba uphawu lwephupha luyabonisa xa uphupha ubuchule obungaphaya kwendalo okanye iphupha elinomlingo lingatolikwa njani ngokukodwa?
1 Uphawu lwephupha «umlingo» - ukutolika ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umlingo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umlingo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umlingo» - ukutolika ngokubanzi
Con umlingo Njengophawu lwephupha, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha akuhlanganisi kuphela ubudoda, kodwa kwanamandla kunye iimpembelelo ezinamandla. Ukuba umntu ophuphayo uzibona ephupheni kwindima yomlingo, ngokuqinisekileyo uya kuyiphumeza injongo yakhe ebomini bokwenyani. Nangona kunjalo, akunakulindeleka ukuba oku kuphela
kuhamba ngenkuthalo nangokunyaniseka.
Umlingo wenza ukuba kungenzeki ngomlingo. Ngokufanayo, ukuphupha kukwafumana indlela yokuphumeza izicwangciso zakho. Kwaye akanantloni ngokuhlamba amehlo kancinci. Kuba eyona nto ibalulekileyo kuye ngoku yimpumelelo. Ukufezekiswa njani oku kubaluleke kakhulu.
Ukuba umlingo wenza ubuqili obuninzi ephupheni, kungekudala kuya kuba bubomi bephupha. ingcaciso umba opaque ufikile. Ukuchuma kunye nobomi obonwabisayo nosapho kunokulindelwa ngenxa yale meko yamaphupha omlingo.
Uphawu lwephupha «umlingo» - ukutolikwa kwengqondo
Umlumbi ngokusisiseko uzifumana ekuchazeni kwengqondo yephupha kuye Ukuzithemba ngokugqithiseleyo kunye nesimo sengqondo sokungazi nto ngobomi. Ukuphupha kukwenza ngokungakhathali. Ubeka izandla zakhe ethangeni lakhe kwaye ulindele isisombululo esingummangaliso kwiingxaki zakhe. Oku kunokubangela amava angathandekiyo. Kuya kufuneka ulahle le naivety yobuntwana ngokukhawuleza kwaye ufunde ukuthatha uxanduva ngekamva lakho. Oku kubandakanya ukuyeka ukutyhola abanye ngolonwabo lwakho ebomini.
Mhlawumbi umlingo uzirhwele ephupheni? Ke ukutolikwa kwamaphupha, kunokuba kubalulekile ukuba yintoni oyithandayo. Mhlawumbi isilwanyana okanye omnye umntu? Khumbula kwakhona kwaye usebenzise iisimboli zamaphupha ezihambelanayo nokutolika kwakho amaphupha.
Umfanekiso wephupha "umlingo" unokuba ngu uphawu lwesilumkiso unayo. Ukuphupha akufuneki ukuba uzivelele. Kubalulekile ukuba nokuzithemba okusempilweni, kodwa umntu ekuthethwa ngaye unokuqiniseka kakhulu ngokungaqhelekanga kwakhe.
Uphawu lwephupha «umlingo» - ukutolika kokomoya
Kutoliko lwamaphupha okomoya lubonakala kumfanekiso wephupha «umlingo» amandla e-shamanic. Umlumbi uhlala ejikelezwe ngamandla amakhulu, amnyama, kunye namandla angalunganga awasebenzisayo ukoyisa ezinye izidalwa. Ukuphupha kufuneka kukhathalelwe ngaphakathi el mundo Ngokwenyani ukuba ungabi sisixhobo sabanye abantu.